musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Gore Riri Kukuvadzwa Nekuda Kwekunyara Kwevashandi
Veritas Technologies, kambani inodzivirira data, nhasi yazivisa zvakawanikwa mutsvagiridzo itsva inoratidza kukuvadzwa kuri kuita nzvimbo dzebasa pakubudirira kwekutorwa kwegore. Veritas yakaona kuti mabhizinesi ari kurasikirwa nedata rakakosha, senge maodha evatengi uye data rezvemari, nekuti vashandi vemuhofisi vanotya zvakanyanya kana kunyara kuzivisa kurasikirwa nedata kana nyaya dzerudzikinuro kana vachishandisa Cloud application, seMicrosoft Office 365.
"Mabhizinesi anofanirwa kubatsira, kwete kupa mhosva, vashandi kana data rarasika kana kuvharirwa nevabiki nekuda kwekuita kwevashandi," akadaro Simon Jelley, maneja mukuru weSaaS kuchengetedza kuVeritas. "Kune kazhinji kapfupi hwindo uko mabhizinesi anogona kuita kuti aderedze maitiro ekudzima kana kukanganisa makore-based data office vashandi vanoshandisa. Vatungamiriri vanofanirwa kukurudzira vashandi kuti vauye kumberi nekukurumidza kuitira kuti zvikwata zveIT zviite nekukurumidza kutora matanho ekugadzirisa. Zviripachena kubva mukutsvagisa uku kuti kunyadzisa uye kurangwa hadzisi nzira dzakanakisa dzekuita izvozvo. "
Chikuru pakati pezvakawanikwa ndechekuti vanopfuura hafu (56%) yevashandi vemuhofisi vakadzima netsaona mafaera akachengetwa mugore-senge zvinyorwa zvebhizinesi, mharidzo nemaspredishiti - uye vanosvika makumi maviri muzana vanozviita kakawanda pasvondo. Zvimwe zvakawanikwa ndezvi:
Vashandi vanonyanya kunyara, vanotya kubvuma kukanganisa
Tsvagiridzo iyi yakaratidza kuti 35% yevashandi vakanyepa kuvhara chokwadi chekuti vakadzima netsaona data ravakachengeta mumadhiraivha egore akagovaniswa. Uye nepo 43% vakati hapana akaona kukanganisa kwavo, muzviitiko zvakawanikwa tsaona, 20% yevakapindura vakati data racho rakanga risisagoneke.
Pavakabvunzwa kuti sei vatadza kuzadzisa zvavakakanganisa, 30% yevakabvunzwa vakati vakaramba vakanyarara nekuti vainyara, 18% nekuti vaitya zvaizoitika uye 5% nekuti vakambopinda mutsekwende nemadhipatimendi avo eIT. .
Vashandi vanotonyanya kuuya nezviitiko zveransomware. Vangori 30% yevakapindura vakati vachabva vareurura zvikanganiso zvakaunza ransomware mumasangano avo. Zvimwe zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvakati hapana chavachaita kana kuita senge zvisina kuitika, uye zvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana vakati vachasiya mhosva dzavo pavanenge vachimhan’ara nyaya iyi.
"Vashandi vari kuwedzera kuvimba nehutekinoroji hwemakore kuvabatsira kuti basa ravo riitwe," Jelley akawedzera. “Nhasi, 38% yevashandi vemuhofisi vanochengeta dhata mumaforodha emakore avakagoverwa, 25% mumaforodha anowiriranisa gore uye 19% mumafolda emakore avanogovana nezvikwata zvavo. Nehurombo, kana vanhu vazhinji vari kuwana madhiraivha egore, mikana yakawanda iripo yekuti vanhu vadzivise kufungira kana kupa mhosva. Nekudaro, tisingazive zvizere nezve kuti ndiani akakonzeresa kurwiswa kwerensomware, uye sei uye riini, zvakanyanya kuoma kudzikamisa maitiro ayo. "
Gore rinopa vashandi vehofisi chivimbo chenhema
Tsvagiridzo iyi yakaratidzawo kuti mushandi haana kunzwisisa kwakajeka kwekubatsira kwakadii makambani efu anotambira mafaera avo angave kana data ravo rarasika. Muchokwadi, vangangoita vashandi vese (92%) vaifunga kuti mupi wavo wegore aizokwanisa kuvadzosera mafaera avo, kungave kubva kukopi yegore, yavo 'yakadzimwa zvinhu' folda kana backup. 15% vakafunga kuti 'zvinhu zvadzimwa' zvaizowanikwa kwavari mugore kweinenge gore mushure mekunge data yarasika.
"Inenge hafu (47%) yevashandi vemuhofisi vanofunga kuti data riri mugore rakachengeteka kubva kune ransomware nekuti vanofungidzira kuti vanovapa makore vari kuidzivirira kubva kune malware yavanogona kuunza netsaona," akadaro Jelley. “Iyi ifungidziro isiriyo iyo icharamba ichiisa mabhizinesi panjodzi kusvika yanyatsogadziriswa. Chokwadi ndechekuti, sechikamu chebasa ravo rakajairwa, vazhinji vanopa gore vanongopa vimbiso yekusimba kwesevhisi yavo, havape vimbiso yekuti mutengi, vachishandisa sevhisi yavo, achave nedata ravo rakachengetedzwa. Muchokwadi, vazhinji vanoenda kure kuti vave neakagovaniswa-ane mutoro mamodheru mumatemu nemamiriro avo, izvo zvinojekesa kuti data remutengi ibasa ravo kuchengetedza. Kuchengeta data mugore hakuite kuti ive yakachengeteka, ichiri kuda kuchengetedzwa kwakasimba kwedata. "
Kurasika kwedata kunoita kuti vashandi vabate
Netsika yemazuva ano yekunyara, kurasikirwa nedata kuri kukanganisa hutano hwevashandi — 29% yevashandi vemuhofisi vanotaura vachishandisa zvinonyadzisira pavakarasa data, 13% vakarova uye vakatyora chimwe chinhu uye 16% vakachema. Maererano netsvagiridzo, kurasikirwa nedata rine chekuita nebasa kana kuunza ransomware zviviri zvezvinonyanya kushungurudza zviitiko zvevashandi vemuhofisi-zvinoshungurudza kupfuura zuva rekutanga, kubvunzurudzwa kwebasa kana kugara kwebvunzo.
“Hazvishamisi kuti vashandi vemuhofisi vari kusvimha misodzi, vachituka uye vachinyepa pavanoona kuti mafaira avo arasika zvachose,” akapedzisa kudaro Jelley. "Zvinoita senge nhamba huru yavo vanotenda kuti zvichave nyore kudzoserwa data kubva kukambani inopa basa ravo regore - muchokwadi, iro harisi basa ravo. Nekuda kweizvozvo, 52% yevakapindura kuongororo yedu vakati vakadzima faira mugore netsaona uye havana kuzombokwanisa kuridzosera. Ibasa rebhizinesi rega rega kuchengetedza yavo data, ingave iri mugore kana kuchengetwa pamidziyo yavo. Kana vakakwanisa kuwana izvo uye kuita kuti zvive nyore kune vashandi kudzoreredza mafaira akarasika, saka vanogona kutora kumanikidza kubva kuvashandi vavo. Kupa vanhu mhosva hakubatsire — kutsigira data rako zvakadaro, zvinoita. ”
Tsvagiridzo iyi yakaitwa uye nhamba dzakagadzirirwa Veritas ne3Gem, iyo yakabvunzurudza 11,500 vashandi vemuhofisi muAustralia, China, France, Germany, Singapore, South Korea, UAE, UK uye US.